Wararka - “kor u kaca qiimaha” ee labadii sano ee la soo dhaafay, kuwo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah ……
“Qiimaha kor u kaca” ee labadii sano ee la soo dhaafay, kuwo badan oo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah ……
"Qiimaha kor u kaca" labadii sano ee la soo dhaafay, shirkado badan oo yar yar iyo kuwa dhexdhexaad ah uma adkeysan karin cadaadiskaan waxaana si tartiib tartiib ah looga ciribtiray suuqa. Marka la barbardhigo dhibaatada soo food saartay shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, shirkadaha waaweyn ee leh alaabooyin farsamo oo dheeri ah saameyn yar ayey ku leeyihiin. Dhinaca kale, baahida weyn ee loo qabo alaabta ceeriin ee shirkadaha waaweyn, qalabka ceyriinka ee shirkadaha waaweyn guud ahaan waxay isticmaalaan mustaqbalka. Astaamaha ganacsiga mustaqbalku waxay u saamaxayaan shirkadaha waawayn inay iibsadaan alaab-qeybiyeyaasha alaabada ceyriinka ah ee alaabta ceyriin ee xasilan bilaha soo socda ka hor qiimaha kororka, taas oo si weyn u yareyneysa saameynta kor u kaca qiimaha alaabta ceyriinka ee shirkadaha. Dhinaca kale, shirkadaha waaweyni waxay ku tiirsan yihiin tikniyoolajiyadda casriga ah iyo waxsoosaarka heer sare ah ee kantaroolka suuqa dhexe illaa dhammaadka. Qiimaha lagu daray alaabtu wuu sarreeyaa, iyo awoodda u adkeysiga halista sare u kaca qiimaha alaabta ceyriin shaki la’aan way ka xoog badan tahay.
Intaas waxaa sii dheer, saameynta tartanka suuqa oo buuxa iyo cadaadiska deegaanka, awoodda wax soo saar ee gadaal ayaa si tartiib tartiib ah loo nadiifiyay, taas oo sidoo kale dhiirrigelisay casriyeynta tiknoolajiyadda ee warshadaha, warshadaha kabaha ayaa ku soo laabtay waddada saxda ah, iyo saamiga suuqa ee shirkadaha hogaaminaya warshadaha ayaa sii kordhay. Mustaqbalka, iyadoo si joogto ah loo horumarinayo takhasuska suuqa, tayada iyo heerka silsiladda warshadaha kabaha Jinjiang ayaa keeni doonta xaalado wanaagsan, wax soo saarku wuxuu noqon doonaa mid aad u urursan, suuquna wuxuu noqon doonaa mid xasilloon.
Xaqiiqdii, marka lagu daro kuwani tiknoolajiyadeed ee suuqa, qaar ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyada casriga ah ayaa horeyba u sameeyay guulo wax soo saarka caqliga leh ee dharka. Tusaale ahaan, astaanta dharka ee "Jiaoyi" ayaa dib u qaabaynaysa silsiladda dharka keena iyadoo loo marayo xog weyn iyo wax soo saar caqli leh si loo gaadho wareejin sare iyo wareejin hoose. Tirakoobku xitaa wuxuu ku dhow yahay eber. Xindong Technology waxaa la aasaasay 2018. Tiknoolajiyada jilitaanka qalabka dijitaalka ah ee 3D ee loo yaqaan '3D-ultra-saxda ah' ee loo abuuray iskaashiga Shiinaha Xarunta Macluumaadka Dharka waxay u oggolaaneysaa dharka inay ka faa'iideystaan ​​tiknoolajiyada dijitaalka ah, iyagoo ka caawinaya shirkadaha inay si dhakhso leh u muujiyaan muujinta sheyga iyo iibka eber-kharashka ka hor dharka 50% kharashka cilmi baarista iyo horumarinta iyo 70% kharashaadka suuq geynta ee soosaarayaasha iyo milkiileyaasha magacaba ayaa gaabiyey wareejinta gaarsiinta
Dhoofinta dharka hadda waxay ku taal barta isbeddelka, dhiirrigelinta iibinta + jiilaalka qaboobaha ayaa ka caawinaya cunitaanka dharka
Waxaa saameeyay cudurka faafa qeybtii hore ee sanadka, in ka badan 80% dakhliga shirkadaha warshadaha dharka ayaa hoos u dhacay, taasoo si ba'an u saameysay barwaaqada warshadaha. Sida laga soo xigtay xogta Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda, bishii Ogosto, dhoofinta dharka ayaa kordhay 3.23% sanadkiiba, taas oo ahayd markii ugu horreysay ee kororka wanaagsan ee billaha ah uu dib u billowdo ka dib 7 bilood oo ah koboc aan wanaagsaneyn sannadka dhexdiisa.
Bishii Sebtembar, waxqabadyada 'Bisha Kobcinta Isticmaalka' ee Qaranka ee 2020 oo ay soo qabanqaabiyeen Wasaaradda Ganacsiga iyo Raadiyaha Dhexe, Filimka iyo Telefishanka iyo "kow iyo tobnaad" fasaxa damaashaadka ayaa si weyn kor ugu qaaday wershadaha dharka iyo dharka. Waxqabadyada soo socda ee "Double Eleven" iyo "Double 12" w waxay sii wadayaan kordhinta isticmaalka dharka iyo dharka. Intaa waxaa dheer, Maamulka Saadaasha Hawada ee Shiinaha ayaa sheegay Oktoobar 5 in dhacdada La Niña la filayo inay dhacdo xilliga qaboobaha, taas oo loola jeedo ifafaalaha biyaha qabow ee leh heerkulka dusha sare ee anomaloussea ee bartamaha iyo bariga Baasifigga oo gaadhay heer cayiman xoojinta iyo muddada. Cimilada qabow ee xilliga qaboobaha ayaa si weyn u kicisay isticmaalka dharka xilliga qaboobaha.
Guddiga Insole oo leh Eva, Cirbadda Cirbadda Aan Dhicin, Guddiga Waraaqaha Waraaqaha leh Eva, Dhar aan Xakameyn oo leh Eva, Maro Nonwoven Dahaarka leh Eva xumbo, Kabaha Xaashida Insole,